Mod in DVD - Sida loo Beddelaan mod in DVD la mod in DVD Converter
> Resource > DVD > Sida loo Beddelaan mod in DVD la mod in DVD Converter
Weligaa aad soo gaarto dhibaato ah ee diinta mod in DVD ? Dad badan waxay jecel yihiin in ay sii xasuus macaan kaamirada maalmahan. Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad wax ka bedel iyo mod gubi in DVD si ay u wadaagaan videos la qoyskaaga iyo saaxiibadaa ama si loo badbaadiyo xusuus aad qaali u ah in DVD cajalladaha waarta. Halkan waxaan ku talinaynaa Wondershare DVD Creator , kaas oo kaa caawin doona inaad badalo iyo mod gubi in DVD aan ka kaaftoomi kasta.
Free download mod ay u DVD abuure, ka dibna raac tallaabooyinka hoose. Haddii aad isticmaalayso Mac ah oo aad rabto inaad badalo mod in DVD ee Mac (Mountain Libaaxa, Libaaxa ka mid ah), waxa aad ku gaari kartaa iyadoo Mac DVD Creator . Hoos hage qaadataa shaashada Windows, kaliya aad hubiso in aad kala soo bixi version saxda ah.
Sida loo Beddelaan mod in DVD oo Talaabo Talaabo ah:
Tallaabada 1. Ku dar videos fiidiyo ugu DVD Converter ah
Marka hore, fadlan wareejin videos ka kaamirada si aad u computer. Guji "Import" si dar files mod aad u baahan tahay si ay u gubaan galay mod ay u DVD gubi.
Tallaabada 2. Edit iyo retouch videos
Dooro video ah oo aad rabto in aad wax ka bedel hortiisa ka ololaya iyo dalagga, jar, waxa ay isku shaandheyn sida aad jeceshahay. Waxa kale oo aad ku dari kartaa watermarks in videos iyo saamaynta video dhigay qoraalka iyo image u saamayn fiican muuqaal ah.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo mod gubi in DVD
Ka hor inta aadan bilaabin inaad badalo mod in DVD, aad ku eegaan kartaa in aad aragto in wax walba si wanaagsan. Si fudud ku dhacay "Kulanka Xiisaha Leh" si aad u daawato videos DVD ah. Ka dib markii in, guji "Guba" in mod bilaabaan in ay diinta ka DVD waqti.
Iyada oo xirfad mod in DVD Converter - Wondershare DVD Creator , waxaad si fudud karaa badalo mod in DVD si aad ku raaxaysan karaan filimada la qoyskaaga guriga.
Aqoon ku saabsan mod iyo kaamirada mod
Mod waa qaab lagu duubo si loogu isticmaalo kaamirada tapeless digital ah. Kaamirada mod ka mid ah:
Kaamirada JVC mod : GZ-MC100, GZ-MC200, GZ-MG30, GZ-MG70, GZ-MG37, GZ-MG77, GZ-MG505, GZ-MG130, GZ-MG155, GZ-MG175, GZ-MG255, GZ- MG555, GZ-MS100U, GZ-MG7230, GZ-MG630, GZ-MG670, GZ-MG680
Kaamirada Panasonic mod : SV-AV100, JDS-S100, JDS-S150, JDS-S10, JDS-H18, JDS-H200, JDS-H20, JDS-H60, JDS-S7, JDS-SW20, JDS-SW21, SDR- S26, JDS-S50, JDS-T50P, JDS-T55P, JDS-H85P
Kaamirada Canon mod : FS100, FS10, FS11, FS200, FS21, FS22
Talooyin: mod ​​aan ay taageerayaan iPhone / iPad / iPod. Haddii aad rabto in aad daawato aad fiidiyo videos mod on qalabka macruufka aad, waxaad isticmaali kartaa a Vide Converter si loogu badalo faylasha mod in videos MP4 in ay taageerayaan qalabka macruufka.
Download mod in DVD Converter: